I-TCL TS6110, indlela enexabiso eliphantsi yokwakha ithiyetha yasekhaya ngeDolby Audio | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 05/04/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 27/03/2021 19:57 | ngokubanzi, Reviews
Xa kufika imivalo yesandi ngamazibuko HDMI kunye nokuziphendukela kwayo kwezinye izinto ezibhangqileyo kunye nezandi ezikrelekrele, ngoku kunanini na uninzi lwabasebenzisi lukhetha ukunyusa iinkqubo zemidlalo yeqonga ngexabiso eliphantsi kakhulu, into eyake yakhona, kwixesha le "analog" yayiyinto eneendleko eziphantse zazithintela.
Kule ndlu sithanda ukukubonisa zonke iintlobo zezinye iindlela, kwaye kude neemveliso eziphezulu esele sikubonise zona kwicandelo leKhaya-Cinema, Sikuzisa uhlalutyo olunzulu lwe-TCL TS6110 ibar yesandi yeqonga lasekhaya, masibone ukuba iziphatha njani kwaye zeziphi ezona zinto zibalaseleyo.
2 Unxibelelwano kunye noqwalaselo
4 Amava omsebenzisi kunye nomgangatho weaudio
I-TCL luphawu olwamkelweyo kwicandelo le-multimedia, nangona sibonile ukuba izixhobo eziphathwayo ziqaliswe ngophawu, inyani kukuba ibisoloko isaziwa ngoomabonakude bayo ngexabiso elifanelekileyo lemali nakwiimveliso zayo zomsindo, le yokugqibela ibe ngabo namhlanje abasizise apha. Kule meko, i-TCL yokuhlengahlengisa ixabiso ukuya kwelona liphezulu akusoloko ikunika uyilo olwamkelekileyo, kwaye yile nto yenzekileyo ngeli candelo sil kuvavanyileyo.
Ubungakanani bebar yesandi: 800 x 62 x 107mm
Ubungakanani be-Subwoofer: 325 x 200 x 200m
Ubunzima bebha: 1,8 Kg
Ubunzima be-Subwoofer: 3 Kg
Yenziwe ngokupheleleyo ngeplastikhi emnyama, Ngengubo yokwaleka ngaphambili, inokubamba okuhle emazantsi ukunciphisa ukungcangcazela. Icandelo eliphezulu linokukhetha ukukhetha imultimedia, ngelixa ngasemva kwelaphu kufihliwe iphaneli ye-LED yemibala eya kubonisa umthamo kunye nohlobo loqhagamshelo. Ngasemva zizidibanisi esiza kuthetha ngazo kamva. Ubungakanani bukwathintelwe kakhulu kwi-Sub, nangona kule meko inobunzima obuphezulu obubonakalayo kunebar yesandi kunye neepads zerabha ukunciphisa unxibelelwano.
Siqala ngecandelo lokudityaniswa, Okokuqala, siqaqambisa ukuba ibar yesandi ibandakanya inkqubo ye-Bluetooth 4.2 engenazingcingo, ngaphandle kokulibala ukuba uqhagamshelo lwayo oluphambili kufuneka luze kwizibuko le-HDMI ngasemva okanye, ngokungaphumeleli, igalelo leaudiyo ebonakalayo. Nangona kunjalo, kwezona zinto zixhaphakileyo, izibuko le-USB likwabandakanyiwe eliza kusivumela ukuba sidibanise imithombo yeaudio kunye neyakudala, kodwa engabalulekanga kangako, uqhagamshelo lwe-AUX eyi-3,5-millimeter.
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi ARC
Inkqutyana yenxalenye yayo inonxibelelwano oluzenzekelayo nolungenazingcingo kunye nebar yesandi ngonqakrazo olunye eya kuyeka ukudanyaza xa olo nxibelelwano lusekiwe. Oko kuyakusisindisa ngentambo, hayi intambo yamandla, eya kuthi izimele. Uqwalaselo lulula, njengoko luya kuhlala lubeka phambili kwigalelo lomsindo ngoqhagamshelo lwe-HDMI, Nangona kunjalo, kuyakuhlala kuyimfuneko ukusebenzisa ulawulo lwebar yesandi kuyo yonke imisebenzi, ngaphandle kokunyusa nokuthoba umthamo weTV, esinokuyenza ngolawulo olufanayo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba Izibiyeli ezimbini zibandakanyiwe kwiphakheji eya kusivumela ukuba silungelelanise ibha yesandi ngqo eludongeni, kunye nephepha eliza kusebenza njengesikimu xa usenza imingxunya ehambelana nodonga. Into ephawulekayo ngokujonga uluhlu lwamaxabiso imveliso ekuyo.
Xa sele sithethile konke oku kungasentla, siqala ngokukhankanya oko izibuko lonxibelelwano le-HDMI linetekhnoloji ye-ARC, ewe, sihlala kwi-HDMI 1.4. Ngokwenxalenye yayo, iyakusivumela ukuba sinxibelelane nolawulo lukamabonwakude ngokuthe ngqo kwibar yesandi, kunye nokuthumela kunye nokufumana ulwazi phakathi kwezi zixhobo zombini, kwaye eso sisibonelelo esidumileyo. Ngokwenxalenye yayo, le bar yesandi ayinakho ukunxibelelana ngaphandle kwamacingo.
Sinefayile ye- 95db ubuninzi bomthamo ohambelana namandla ayo ubuninzi be-240W. Akulunganga kwibar yesandi enobunzima obunqandiweyo. Kwinqanaba lokuhambelana esinalo 5.1 ukubonwa kuya kubonelelwa nguDolby, inyani kukuba ngaphandle kokuba iaudiyo ichithwe kakhulu ngaphambili, ubuchule buwenza umsebenzi wawo kwaye bumnandi ngaphandle kokubonakala. Nangona kunjalo, Umyalelo uya kusivumela ukuba siphume phakathi kokulingana kathathu kulungelelwaniso lwamaxesha athile anje nge: Cinema, TV kunye nomculo.
Amava omsebenzisi kunye nomgangatho weaudio
Eyona nto ibaluleke kakhulu kolu hlobo lwemveliso ihlala ikumgangatho wesandi, ngakumbi xa sithetha ngexabiso lamaxabiso asezantsi, apho sinokufumana khona nantoni na. Inyani yile yokuba ngaphantsi kwe-euro ezingama-150 le bar yesandi iyahambelana, ngakumbi ukongezwa. Isinika i-bass ebalaseleyo kwaye ezimeleyo sibulela kwi-subwoofer ezimeleyo, Into umntu anokuyilindela kolu hlobo lwemveliso, nangona kunjalo, zihlala zibandakanywa kuba ii-bass "zigubungela" ngokuchanekileyo ezinye iziphene kumgangatho wesandi, into umntu anokuyilindela.
Isandi sithe cwaka xa sithetha ngomabonwakude kunye nomculo, uluhlu oluncinci olunamandla alukho, emva koko uyalikhumbula ixabiso kwaye ukhumbule ukuba kuninzi okunokucelwa. Kwimeko yokuveliswa kwakhona komculo, kukhuselwa ngokukodwa, xa kufikwa kumba wokudlala iimuvi ezinye i-bass zinokufihla incoko, kwaye oko kuyingxaki ngakumbi ebusuku, kwimeko apho kuya kufuneka udlale ngeendlela zokumisela kwangaphambili kunye nolawulo olukude.
Kufuphi Sifumana imveliso ejikeleze ngokulingeneyo ithathela ingqalelo ixabiso lomgangatho wayo, iya kusivumela ukuba sonwabe kwindawo yemidlalo yeqonga kwiimeko ezintle kwaye sizonwabise ngezinga laso elinamandla amakhulu. Zimbalwa iindlela ezizezinye ezenzeka kum kolu luhlu lwamaxabiso olubandakanya ukunyuka kodonga, i-subwoofer eyahlukileyo engenazingcingo, kunye ne-HDMI ARC. ungajonga kwiAmazon ukusuka kwi-150 euro, kwaye ngokwakho TCL iwebhusayithi.
Ithunyelwe nge: 5 April 2021
Izinto ezintle kakhulu kunye noyilo
Ukukhululeka okubonakalayo koqwalaselo
I-subwoofer ezimeleyo kunye neDolby Audio 6 eyiyo
Isandi ethe tyaba
I-Bass inokugqobhoza ingxoxo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-TCL TS6110, indlela enexabiso eliphantsi yokwakha ithiyetha yasekhaya eneDolby Audio